Ingabe imboni noma inkampani ukuhweba?
Thina nje kuphela babe izimboni zethu siqu, kodwa futhi kufanele ukwabelana ngenye amabhizinisi.
Yebo, uma isampula litholakala isitokwe
Ungakwazi yini ukuhlela le mpahla?
Impela, sinalo unomphela yizimpahla forwarder abangakwazi ukuthola intengo engcono inkampani kakhulu umkhumbi futhi banikele inkonzo lochwepheshe.
Kusekelwe oda, ngokuvamile 15 - 20 izinsuku ngemuva kokuthola idiphozi noma L / C at emehlweni.
Ingabe uyakwazi ukulawula izinga?
Yebo, siye sazuza BV , SGS ubuqiniso.
Yiziphi imigomo yakho yokukhokha?
100% singenakushintshwa L / C at emehlweni. Noma T / T , u-30% kusengaphambili, futhi ibhalansi ngokumelene ikhophi B / L zingakapheli izinsuku 3-5.